Home » Vaovao momba ny dia any Eropa » Pasipaoro vaksiny COVID an'ny green EU - misy tahiry
Pasipaoro vaksiny COVID an'ny green EU - misy tahiry
Pasipaoro vaksiny COVID
Fandefasana mifandraika amin'ny fanaovana vaksiny: tanjona iraisana io saingy sarotra ampiharina mandra-pahatongan'ny vaksinin'ny rehetra.
Ny filohan'ny vaomiera UE Ursula von der Leyen dia nanitrikitrika ny maha-zava-dehibe ny "fampivoarana ny fomba eropeana" amin'ny rafitra pasipaoro vaksinina.
"Ny torolàlana ara-politika dia ny fananana ny pasipaoro nomerika ao anatin'ny 3 volana ho avy," hoy ny Chancelior Alemanina Angela Merkel.
Ny filoham-pirenena frantsay, Emmanuel Macron, izay hihaona amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ireo mpikamban'ny governemanta mba hanomanana ny “pass de la health”.
Pasipaoro vaksiny COVID - malaza ny olana ary ankoatry ny ambiny, eo afovoan'ny adihevitra eropeana. Niresaka momba izany nandritra ny filankevitra eropeana izy ireo: "Ny torolàlana ara-politika dia ny fananana pasipaoro nomerika ao anatin'ny 3 volana ho avy," hoy i Angela Merkel, namaly ny fanontaniana iray momba ny fotoana tokony hahavonona ny pasipaoro fanaovana vaksiny any Alemana sy Eropa.
Ny tsirairay dia maniry ny hanomana azy ireo amin'ny fahavaratra noho ny antony mazava momba ny fizahantany. "Nanaiky ny rehetra fa mila antontan-taratasy nomerika manamarina ny vaksininy" hoy hatrany ny Chancellor Alemanina ary "mifanaraka" amin'ny firenena eropeana isan-karazany.
"Manantena izahay fa ho vonona amin'ny fahavaratra izy ireo" saingy tsy hitranga izany raha tsy afaka mivezivezy isika raha tsy misy izany, hoy ihany izy: "Tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra politika momba izany." Ary koa, satria ny ankizy, ohatra, mbola tsy afaka vita vaksiny fanoherana ny COVID.
Ny filohan'ny vaomiera UE Ursula von der Leyen dia nanitrikitrika ny maha-zava-dehibe ny "fampivoarana ny fomba eropeana" ho an'ny pasipaoro vaksinina rafitra.
“Raha tsy mahomby isika, ny fandraisana andraikitra roa tonta” an'ny States Member dia “hiteraka fahasahiranana bebe kokoa” ary na ireo orinasa lehibe toa ny “Google sy Apple dia vonona ny hanome vahaolana ho an'ny WHO,” saingy ny fizarana vaovao tsiambaratelo, noho izany dia te hiteny mazava izahay fa manolotra vahaolana eropeana, nampitandrina von der Leyen.
Mbola hanohy hifampiresaka amin'ny governemanta i Bruxelles mba "handroso amin'ity lalana ity amin'ny volana martsa" hoy ny mpitarika EU, izay nanamafy fa "ny adihevitra dia tokony hisaina ny mety hisian'ny fanavakavahana" ary, miaraka amin'izay, ny zava-misy fa "ho an'ny firenena eropeana maro ,… Ny fizahantany dia tena zava-dehibe amin'ny fomba fijery ara-toekarena sy sosialy. ”
Handeha hivezivezy aorian'ny vaksininy ve isika?
Tsy marina. Izany koa dia nohazavain'ny filoham-pirenena frantsay, Emmanuel Macron, izay hihaona amin'ny mpikambana amin'ny governemanta amin'ny herinandro ho avy mba hanomanana ny “pass de la health”, izay tsy ho «pasipaoro fanaovana vaksiny», raha jerena ny fisokafan'ny toerana misy ny kolontsaina ary trano fisakafoanana mihidy mandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Ny fananganana an'ity fitaovana vaovao ity dia "hiteraka fanontaniana ara-teknika maro momba ny fanajana ny angona isam-batan'olona, ​​ny fandaminana ny fahalalahantsika", hoy i Macron, ary ho an'ity "tsy maintsy omanintsika manomboka izao amin'ny lafiny teknika, politika, ara-dalàna."
"Tsapako," hoy i Macron, "fa misy fisafotofotoana be loatra indraindray momba an'io olana io" fa ny pasem-pahasalamana "dia tsy hifandray amin'ny vaksiny fotsiny" hoy izy nanamafy. Satria “raha mahavita manokatra tranokala sasany izahay, dia tsy ho afaka hametraka ny vaksiny ho azy ireo, ary ankoatry ny zavatra hafa dia tsy hanokatra vaksiny ho an'ny faralahy izahay.”
"Tsy maintsy hialantsika," hoy i Macron taorian'ny dinika androany niaraka tamin'ireo mpitarika ny 27, "fa ny firenena tsirairay dia mamolavola ny rafitra misy azy, miasa amin'ny fanamarinana ara-pitsaboana iraisana."